Minisitra Henry Rabary-Njaka : Hitarika ny fivorian’ireo minisitra Frankôfônina -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Henry Rabary-Njaka : Hitarika ny fivorian’ireo minisitra Frankôfônina
Mazava. Mandray anjara amin’ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana andiany faha-72, any New-York, Etazonia, ny delegasiona malagasy tarihin’ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, ahitana ny minisitry ny Raharaham-bahiny, Henry Rabary-Njaka.
Mialoha izany anefa, hitarika ny fivorian’ireo minisitry ny Raharaham-bahiny sy governemanta Frankôfônina ny minisitra Henry Rabary-Njaka amin’ny maha filohan’ny kaonferansan’ny minisitra ny tenany, izay hiarahany amin’ny sekretera jeneralin’ny Frankôfônia, Michaelle Jean.
Araka izany, raha ny fanazavana, hifototra tanteraka amin’ny resaka fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana ny tontolo Frankôfônina ny fihaonana. Mifandraika tsara amin’ny Fanavaozana ny drafi-pirenena momba ny fandriam-pahalemana, na ny RSS, izay vao natolotra ny Filohan’ny Repoblika, ny 12 septambra teo. Ankoatra izay, fotoana ho an’ny minisitra Henry Rabary-Njaka ihany koa io fihaonambe io, ahafahany mamelabelatra manoloana ireo minisitry ny Raharaham-bahiny Frankôfônina ny ezaka vitan’ny governemanta malagasy amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampandrosoana an’i Madagasikara amin’ny ankapobeny, ary koa ny fifandraisana amin’ireo firenena vahiny, sns.
Etsy andaniny, anisan’ireo mandray anjara amin’ireo hetsika rehetra manodidina io fihaonambe ara-diplaomatika any New-York io ihany koa ny minisitry ny Raharaham-bahiny malagasy, toa ny fifanaovan-tsonian’ny Fifanekena mikasika ny fandrarana ny fampiasana ny fitaovam-piadiana nokleary, ny fakan-kevitra mikasika ny isan’ny mponina ary indrindra, ny fihaonambe momba ny fifanarahana maneran-tany mikasika ny tontolo iainana, sns.
Ankoatra izay, hitarika fifanakalozan-kevitra sy adihevitra ankapobeny mandritra io Fivoriamben’ny Firenena Mikambana andiany faha-72 io i Madagasikara amin’ny maha Filoha lefitry ny Firenena Mikambana azy. Marihina fa mitondra ny lohahevitra “Laharam-pahamehana ny maha olona: Hiady ho amin’ny fandriam-pahalemana sy ny fiainana mendrika ho an’ny rehetra mba ho an’ny planeta voatahiry”, ny Fivoriamben’ny Firenena Mikambana andiany faha-72.
Notanterahina omaly tao amin’ny Stella Maris, tany Toamasina ny lamesa lehibe fametrahana ny Kardinaly Tsarahazana Désiré. Hetsika goavana sy manetriketrika no nentina nanatanterahana izany sorona masina lehibe izany. Haravoana sy endrika mirana no hita tamin’ireo ...Tohiny